Ụbọchị: 2 August 2019
Zyzọ ụgbọ oloko Crazy Turkish Ga-eweta 6 Km Rail A Day
Turkey malitere iwetara na mpaghara mba ọrụ na ụda aga. mmeghari a na ebido n’ichebe ya na ulo oru ikuku na - eme ka obi anyi puta karie. HaberMarmara na-akpọ ahịrị oku nke okporo ụzọ ụgbọ oloko Turkish, 6 km training machine machine nke emebere ma [More ...]
Nleba Anya Mahir Eller Obula Nmata
Turkey Chambers na Stock Exchanges Union (TOBB), n'okpuru idu ndú nke Turkey Economic Policy Research Foundation nke Turkey (TEPAV) na mmekorita ya na European Union (EU) kwụrụ ụgwọ na Bursa Chamber of Commerce and Industry (BCCI) Mahir Aka Project rụrụ na imekọ ihe ọnụ, ẹkenịmde ke Bursa [More ...]
Ankara Bar Association na-arịọ arịrịọ maka TCDD Ankara Station Building
Njikọ Ankara Bar, 1928 ụbọchị nke Ankara Railway Station Campus TCDD ụlọ ndị ọbịa nyere ọkwa banyere mbufe Mahadum Medipol. Okwu nile nke Ankara Bar Association kwuru dị ka ndị a: Enweghị ike, enweghị ntuli aka; obodo [More ...]
Union of Municipality of Marmara na Kocaeli Mayor Assoc. Dr. Tahir Büyükakın na-aga n'ihu na-agbasochi anya ọrụ ndị dị na eriri Gebze Darıca, nke na-aga n'ihu n'ụzọ frenetic. Nyochaa ọrụ na-aga n'ihu na Gebze Town Square na [More ...]
Ndị ọrụ IETT na Ayazağa Garage na-aga n'ihu
Ndi IETT General Directorate Ayazağa gareji ọrụ ịzụrụ ụgbọ njem ọha nke ndị ọrụ nyere n'aka ndị ọrụ ahụ, usoro dị nro na nkwekọrịta ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ na-enweghị nsogbu. N'ụfọdụ akwụkwọ akụkọ taa, “Egburu IETT” na “850 IETT onye ọkwọ ụgbọala 31 [More ...]
Okporo ụzọ na-aga n’ihu na Bursa
Onye isi Bursa Mayor Alinur Aktas, 'obodo a na-enweta ngwa ngwa karịa nke nwere ebumnuche nke ịnọgide na-eme ihe na mpaghara niile na-aga n'ihu na-arụ ọrụ mgbe niile na mpaghara niile, o kwuru. Obodo Bursa nke Obodo Bursa, yana uzo ozo n’etiti obodo [More ...]
Mgbakwunye Ọkwa Nlere Semi-Automatic Emebiri na Efeler
Turkey kasị dị ize ndụ ọkwa crossings dị n'etiti Aydin Efeler ka Soğukkuyu larịị crossings na obodo, ọkara akpaka mgbochi usoro e arụnyere. Usoro ọhụrụ ahụ, nke ga-adọ ndị ọkwọ ụgbọala aka na ntị oge ụgbọ okporo ígwè ahụ ga-amalite, n’izu na-abịa. [More ...]
Taa na History: 2 August 1991 Çamlık Steam Locomotive Museum
Taa na History 2 August 1914 General Nhazi mara ọkwa ma mgbe ahụ, General Directorate of Army Railways jidere okporo ụzọ ndị French na ndị Britain. Ndị Germany na ndị Austrian ụlọ ọrụ gara n'ihu. Ọchịchị ndị agha na Hejaz okporo ụzọ [More ...]